Mkparịta ụka akpaaka nke AI kwadoro - Ọrụ Gartner nke nkata nkata ga -enye ike 85% nke mmekọrịta ndị ahịa yana ndị na -azụ ahịa na -emegharị nke ọma, na -enwe ekele maka ọrụ 24/7, nzaghachi ozugbo na izi ezi nke azịza dị mfe maka ajụjụ. M ga -agbakwụnye na ụlọ ọrụ ndị ọkaibe na -anabata nkata nkata nke na -agbagharị mkparịta ụka ahụ na onye kwesịrị ekwesị n'ime iji wepụ nkụda mmụọ na ahụmịhe ahụ.
Personalization - Gara ụbọchị ndị ahụ Ezigbo %% Aha mbụ %%. Igwe ozi email na ederede ozi ọgbara ọhụrụ na -enye akpaaka nke gụnyere nkewa, ọdịnaya amụma dabere na omume na data igwe mmadụ, yana itinye ọgụgụ isi iji nwalee ma melite ozi na -akpaghị aka. Ọ bụrụ na ị ka na-eji ogbe ma na-agbawa ahịa otu-na-ọtụtụ, ị na-efufu ndu na ahịa!
Ahịa Site na ngwa ozi - N'ihi na anyị na -ejikọkarị oge, izi ozi nke ozi dị mkpa nwere ike ịkwalite njikọ aka. Ma ọ bụ ngwa mkpanaka, ngosi ihe nchọgharị, ma ọ bụ ọkwa n'ime saịtị ...
Eziokwu gbara ọkpụrụkpụ na Ezigbo Ọdịdị - AR & VR na -etinye n'ime ngwa mkpanaka na ahụmịhe ndị ahịa ihe nchọgharị zuru oke. Ma ọ bụ ụwa mebere ebe ị na -ezute onye ahịa gị ọzọ ma ọ bụ na -elele vidiyo… ma ọ bụ ngwa mkpanaka iji hụ ka arịa ụlọ ọhụrụ ga -adị n'ime ụlọ gị, ụlọ ọrụ na -ewupụta ọpụrụiche pụrụ iche dị site n'ọbụ aka anyị.
Amamịghe echiche - AI na mmụta igwe na -enyere ndị na -ere ahịa aka imezi, hazie onwe ha, ma kwalite ahụmịhe ndị ahịa dịka ọ dịtụbeghị mbụ. Ndị ahịa na azụmaahịa na -ada mbà n'ihi ọtụtụ puku ozi ahịa nke a na -akwali kwa ụbọchị. AI nwere ike inyere anyị aka izipu ozi dị ike ma na -adọrọ mmasị mgbe ọ kacha emetụta ha.
Obi abụọ adịghị ya, blọọgụ gị bụ nnukwu isi iyi nke infographics dị ịtụnanya. Ọzọkwa, a na-ede akụkọ ọ bụla nke blọọgụ gị nke ọma na nke ọma.
Daalụ maka ịkekọrịta infographics maara ihe!
Jenụwarị 20, 2014, elekere 11:36 nke abalị
Douglas Karr ! N'ezie oke ihe ọmụma òkè. E mebiela gị site na imepụta echiche, echiche. Ọzọkwa Daalụ nke ukwuu
Ụlọ ọrụ Krish Inc
Afọ ọhụrụ na-eweta ya, nnukwu ohere yana ọnọdụ ịntanetị na-esiwanye ike kwa ụbọchị. Ụlọ ọrụ ahụ na-agbanwe mgbe niile, ma nke ahụ bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-akpali akpali.
Ee, Nke bụ́ eziokwu bụ na kwa afọ, ana m agbalị ime ihe m na-ekwu n’uche n’ihe ga-adọrọ mmasị m
na ihe dị mkpa na apple nke agenda azụmahịa na ecommerce maka afọ
N'ezie ihe ọmụma ozi. Nke a bụ n'ezie post dị egwu. Ị gbakwunyela ọtụtụ ozi na blọọgụ gị. Daalụ maka ịkekọrịta ozi a bara uru. Ọ na-enye aka na nkuzi kwa.
Ndewo Douglas ndụmọdụ ahụ dị egwu. Nọgide na-ebisa.
Ọgọstụ 3, 2014 na 1:02 ehihie
Douglas mara mma ma bara uru! Ugbu a amatala m na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-eme mkpebi na azụmahịa zuru ụwa ọnụ na-ahọrọ iji Social media maka ọrụ ọrụ ha niile. Daalụ maka ịkekọrịta!
Nọvemba 7, 2020 na 10:52 nke ụtụtụ
Nọvemba 7, 2020 na 10:53 nke ụtụtụ
Ọgọstụ 25, 2021 na 12:21 ehihie
Ndewo John, echere m na usoro 2014 bụ eziokwu bụ isi ugbu a, ndị mmadụ na-arụ ọrụ site na ụlọ na ịzụ ahịa site na ngwaọrụ mkpanaka ha na-akwalite.
Nọvemba 3, 2021 na 6:29 nke ụtụtụ
magburu onwe ya na nghọta sir. daalụ nke ukwuu… na-atụ anya ịmụtakwu n'aka gị